LEGO 71030 Looney Tunes ၏စုဆောင်းထားသော Minifigures ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်ပြခန်း
11 / 04 / 2021 26 / 04 / 2021 ရော့ Paton 1739 Views စာ0မှတ်ချက် 71030 Looney Tunes Collectible အသေးစား, bugs Bunny, Daffy ဘဲ, Lego, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego Looney Tunes, lego ပြန်လည်သုံးသပ်, Lola ယုန်, အမ်ဗင်artIan, ဝက် petunia, ဝက်ဝက်, လမ်းမကြီး Runner, မြန်ဆန် Gonzales, ကြောင် Sylvester, Tasmanian Devil, Tweety, အီးဝံပုလှေ Wile
နောက်ထပ်ဖန်တီးမှုအလှည့်, အယူ Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား လိုင်းဖရိုဖရဲနှင့်က c လက်ခံartသာ Looney Tunes ၏ oonish ကျက်သရေ Lego နိုင်။
နှစ်ခုစီးရီးကနေအပေါ်ကိုအောက်ပါ စုဆောင်းထားသောအသေးစား အဆိုပါ Simpsons များအတွက် 2014 နှင့် 2015 ခုနှစ်တွင်လာ။ ပိုပြီးမကြာသေးမီကနှစ်ခု Disney 2016 နှင့် 2019 ၏ဇာတ်ကောင်စီးရီးအတွက်လာပါတယ် Lego အုပ်စု၏နောက်ဆုံးပေါ်ဂartoon-themed collection, Warner Bros မှအထင်ရှားဆုံးဇာတ်ကောင်အချို့အပေါ်အခြေခံသည်။ ' Looney Tunes ။
Looney Tunes သည်စာကြည့်တိုက်တစ်ခုဖွင့်လှစ်ထားသည်မှာ ၉၁ နှစ်ရှိပြီဖြစ်သည် classic cartoon ဇာတ်ကောင်များ၊ အစောပိုင်းနှစ်များမှ စ၍ ရုပ်ရှင်ရုံများတွင်ပြသသည့်ဂီတနှင့်ကာတွန်းကားများ၊ ပြန်လည်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားမှပြသခြင်းအသစ်များအထိ၊ ကြော်ငြာခြင်း၊ ကုန်သွယ်ခြင်း၊ ဖန်တီးလိုက်တဲ့ဇာတ်ကောင်အတော်များများဟာချက်ချင်းမှတ်မိနိုင်လောက်အောင်မြင့်မားစွာကိုးကားနိုင်ဆဲဖြစ်ပြီး၊ ကာတွန်းကမ္ဘာသာမကပိုမိုကျယ်ပြန်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုအရသင်္ကေတများဖြစ်လာသည်။
တစ်ဦး Creating Lego Minifigures Looney Tunes ကိုအခြေခံထားသောစီးရီးသည်ထူးခြားသောဒီဇိုင်းပုံသွင်းထားသောခေါင်းများ၊ လိမ္မာပါးနပ်သောဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်းနှင့်ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာများဖြင့်ထုပ်ပိုးထားသည့်စုဆောင်းမှုကိုဖန်တီးပေးသည်။artoons သူတို့ကနေဖြစ်ကြသည်။ ဤသို့သောအသေးစားပုံသဏ္craftာန်များကိုတီထွင်ဖန်တီးခဲ့သောဂရုစိုက်မှုနှင့်ဂရုစိုက်မှုတို့သည်တစ်ခုချင်းစီကိုထူးခြားသောဂုဏ်ပြုမှုတစ်ခုရရှိစေသည် classic ခေတ်သစ်စရိုက်လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်သောသူတို့သည်ခေတ်သစ်နေဆဲဂသို့ပျော်စရာဝင်ပေါက်တစ်ခုပြုသည်artအခြားအဘယ်သူမျှမကဲ့သို့ကစားကမ္ဘာ၏ oon ။
theme: Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား အမည်သတ်မှတ်မည် - 71030 Looney တီးလုံး ဖြန့်ချိ: ဧပြီလ 26
minifigure pack တစ်ခုအတွက်စျေးနှုန်း: £ 3.49 / $ 4.99 / € 3.99 အပိုင်းပိုင်း: ပွောငျးလဲတတျသော အသေးစားပုံများ: အထုပ်နှုန်း 1, စုဆောင်းရန် 12
Lego: ရရှိနိုင်Aprilပြီ 26
တွင်ထည့်သွင်း 71030 Looney တီးလုံး စုဆောင်းထားသောအသေးစား Looney Tunes c တွင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည့်မှတ်သားဖွယ်အကောင်းဆုံးနှင့်အမှတ်ရစရာဇာတ်ကောင် ၁၂ ယောက်အနက်တစ်ခုဖြစ်သည်art၉၁ နှစ်တာကာလကိုဖြတ်သန်းသောသမိုင်းတစ်လျှောက်ရှိ oons ။ ၁၉၃၀ မှ ၁၉၆၄ ခုနှစ်ကာလအတွင်း - အမေရိကန်ကာတွန်း၏ရွှေခေတ်ဟုလူသိများသော - ကာတွန်းဟာသဘောင်းဘီတိုများတွင်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သိနေသော Looney Tunes ဇာတ်ကောင်အများစုကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းနှင့်အသစ်ထုတ်လုပ်ခြင်းတို့ဖြင့်လူကြိုက်များခဲ့သည်။ ကာတွန်းဘောင်းဘီတို, အင်္ဂါရပ်များနှင့်အများကြီးပို။
In 71030 Looney တီးလုံး စုဆောင်းထားသောအသေးစား, အ Lego Looney Tunes ၏ရှည်လျားသောသမိုင်းကြောင်းတစ်လျှောက်တွင်အချို့သောအုပ်စုများအပါအ ၀ င်ဇာတ်ကောင်အမျိုးမျိုးကို Group မှကောက်ယူခဲ့သည် classic နှင့်မှတ်မိနိုင်သူများမှာ - အကြောင်းရင်းနှစ်ခုကြောင့် - အခြားသူများကိုဖယ်ထုတ်ပစ်နိုင်သည်။
အဘယ်သူမျှမ Lego Looney Tune စုဆောင်းထားသောအသေးစား စီးရီးများသည် Looney Tunes သာမကပိုမိုကျယ်ပြန့်သောလူကြိုက်အများဆုံးနှင့်အကျော်ကြားဆုံးဇာတ်ကောင်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သော Bugs Bunny မပါဘဲထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။artoon သမိုင်း။ ကာတွန်း၏အထင်ရှားဆုံးဇာတ်ကောင်များထဲမှတစ် ဦး အဖြစ်သူ၏အဆင့်အတန်းသည်ပြဇာတ်ကာတွန်းအတို ၁၆၀ ကျော်၊ စုစည်းရုပ်ရှင်၊ တီဗီအထူးများ၊ (Nike နှင့် Kool-Aid အပါအ ၀ င်) ကြော်ငြာလှုပ်ရှားမှုများ၊ မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်များ၊ သူ၏ကိုယ်ပိုင် Bugs Bunny ပြပွဲနှင့် ပိုပြီးရုပ်ရှင်ပွဲ အခြားမည်သည့်က c ထက်art၁၉၆၆ အာကာသ Jam တွင် Michael Jordan နှင့်အတူထိပ်တန်းငွေတောင်းခံမှုများနှင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် LeBron James နှင့်အတူ Space Jam: A New Legacy တွင်အဓိက ဦး ဆောင်အခန်းကဏ္ including ပါဝင်သည်။ bugs သည်တရားဝင် Warner Bros. mascot ဖြစ်သည်။ သူသည်ဟောလိဝုဒ်လမ်းလျှောက်ခြင်းတွင်သူ၏ကိုယ်ပိုင်ကြယ်ပွင့်ရှိသည်။ Guinness World Records ကပင်သူသည်သူ့ကိုဖော်ပြခဲ့သည် ရုပ်ရှင်ထဲတွင်နဝမ - အများဆုံးပုံဖော်ဇာတ်ကောင် အားလုံးအချိန်။
လိမ္မာပါးနပ်ပြီး outsm ၏စွမ်းရည်အဖြစ်ဖော်ပြသည်artသူဆန့်ကျင်သူမည်သူမဆိုနီးပါး ing, Bugs သည် Looney Tunes အဖွဲ့သားအားလုံးနီးပါးနှင့်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ ဒါရိုက်တာ Chuck Jones ကပရိသတ်များသည်အမြဲတမ်းအနိုင်ရသည့်ယုန်အားမိမိ၏ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုစိတ်ထဲပုံဖော်ခြင်းအားဖြင့်စာနာမှုရှိသူအားတစ်နည်းနည်းဖြင့်အနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေမီစာနာနားလည်မှုရှိစေရန်ဂရုပြုခဲ့သည်။ bugs များသည်ဟာသခေါင်းဆောင်အဖြစ်ဂုဏ်ပြုခံရပြီး၎င်းသည် unwitting counterp တွင် script ကိုလှန်ပစ်နိုင်သည်arts ကိုမကြာခဏ 'လှလှပပရေးဆွဲ' 'ခံခဲ့ရသည်အဖြစ်မီးမောင်းထိုးပြနေသည်။
ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုများနှင့်အခြား c နည်းတူများပြားလှသောပရိသတ်ကိုလေးစားမှုရှိခြင်းartoon ဇာတ်ကောင်, သင်တန်းသူယခုသူတစ် ဦး ရှိပါတယ် Lego Minifigure လည်းပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းသည်လိမ္မာပါးနပ်စွာသဘောပေါက်ထားသည့်ဖန်တီးမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူသည် Looney Tunes ခေါင်းစဉ်ကဒ်ပေါ်တွင် Bugs ၏ပါးစပ်ပွင့်လင်းသောအပြုံးကိုဖမ်းမိသည်။ မိမိအရှည်လျားဂျပိန်ကိုယ်ခန္ဓာသို့ Morphing Lego ပုံစံသည်အလွန်အံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သည်။ Lego Group မှအစဉ်အဆက်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ Bugs များပါ ၀ င်သည့်မုန္လာဥနီသည်အမှန်စင်စစ်ဖြစ်သင့်သော်လည်း Daffy Duck နှင့်အတူပါလာသည့်အရာအားကြည့်။ 'Duck Season' သည်ရယ်စရာကောင်းလိမ့်မည်။ ဖြစ်နိုင်လျှင် Lego Group သည်ဒုတိယမြင်ကွင်းအသေးလေးများကိုပြုလုပ်ပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘေးထွက်ကြည့်။ ပါးစပ်ပိတ်။ ပြုံးနေသောပြသနာများရှိနေသည်။
Looney Tunes ၏အဓိကကြယ်ပွင့်အနေနှင့် Lego ကျွန်ုပ်တို့လက်ခံနိုင်သည့် Bugs Bunny ကိုမှန်ကန်စွာလုပ်ရန်လိုသည် Lego တစ် ဦး ယုံကြည်အဖြစ် Looney Tunes စုဆောင်းထားသောအသေးစား စီးရီး။ ကျေးဇူးတင်စရာကောင်းတာကဒီနားရွက်ဟာအိတ်ထဲကသူကိုလွယ်လွယ်ကူကူခံစားမိစေဖို့ကျေးဇူးတင်စရာပဲ။
(၁၉၉၆) Space Jam ကို Bugs Bunny အတွက်ချစ်ခြင်းမေတ္တာအဖြစ်တင်ပြခဲ့သည် (ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယခင်ယုန်ကောင်ရုပ်ကောင်ဖြစ်တဲ့ Honey Bunny ဟာ Bugs နဲ့ဆင်တူတယ်လို့ထင်မြင်ခဲ့လို့) Lola ဟာအားကစားအတွက်သဘာဝစွမ်းရည်ရှိတဲ့ယုံကြည်မှုရှိပြီးအရည်အချင်းပြည့်ဝတဲ့အမျိုးသမီးဇာတ်ကောင်အဖြစ်သရုပ်ဖော်ခဲ့သည် Looney Tunes Show သည်သူမအားသူမအား ပိုမို၍ စိတ် ၀ င်စားမှုမရှိ၊
သူမသည်မကြာခဏအချစ်ဇာတ်လမ်းများနှင့်ချိတ်ဆက်ထားခြင်းခံရပြီး၊ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးအမျိုးသမီးအဖြစ်သတ်မှတ်ခံရသည်။artတစ် ဦး အတွက် oon ဇာတ်ကောင် Google ဒေတာအခက်အခဲ (စစ်တမ်းနှင့်မရောထွေးစေရန်) ။ အရေးကြီးသည်မှာဒါရိုက်တာ Malcolm D. Lee က Lola ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုကတိပေးခဲ့သည် လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည် in Space Jam: အသစ်သောအမွေ (ယခုနှစ်နှောင်းပိုင်းတွင်) သည် 'အားကောင်း။ အရည်အချင်းရှိသောအမျိုးသမီးဇာတ်ကောင်' ဆီသို့ ဦး တည်သွားရန်အရိပ်အမြွက်ပြောကြားသည်။
ဂိမ်း Lego ဒီဇိုင်းအပေါ်အခြေခံပြီးခံရဖို့မကြည့်ရှုသည် artSpace Jam ရုပ်ရှင်မှဖြစ်စေ၊ တိကျသော c မှဖြစ်စေအလုပ်လုပ်သည်artဒါပေမယ့်သူမသည်အရောင်းမြှင့်တင်ရေးပစ္စည်းများနှင့်ကုန်သွယ်ခြင်းကိုရှာဖွေသည်။ ဒါကပို။ p ကိုရှင်းပြလိမ့်မယ်artသူမ၏ minifigure ၏ဒုတိယသားမွေးအရောင်သည်အဘယ့်ကြောင့်အညိုရောင်မဟုတ်ဘဲအဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်အသေးစိတ်အချက်အလက်များဖြစ်သည်။ Minifigure ၏ဒီဇိုင်းတစ်ခုလုံးသည် Lola ၏အားကစားဘက်ကိုလှပသောပုံစံဖြင့်ကိုယ်စားပြုသည်။ လာမည့် Space Jam ရုပ်ရှင်တွင်သူမ၏အခန်းကဏ္onကိုမျက်ခြည်မပြတ်ကြည့်ခြင်းဖြင့်ပိုမိုယုံကြည်စိတ်ချရပြီးပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာပါဝင်သည်ဟုကတိပေးသည်။ Lego အုပ်စုသည် sm ဖြစ်ခဲ့သည်art သူမ၌မှန်ကန်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုဘယ်လိုကိုင်တွယ်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာပါ Lego မင်္ဂလာပါ။
Daffy သည်သေးငယ်။ အလွန်အမင်းတိုက်ခိုက်ခြင်းနှင့်ကြိုတင်ခန့်မှန်း။ မရသောအကျင့်စရိုက်တစ်ခုအဖြစ်စတင်ခဲ့သည်။ Looney Tunes ဘောင်းဘီတို၌သူ၏အစောဆုံးပေါ်ထွက်လာမှုသည် ၁၉၃၀ ပြည့်လွန်နှစ်များနှောင်းပိုင်းမှစတင်ခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်စာနာတတ်သောဇာတ်ကောင်များနှင့်စွမ်းအင်ဆန့်ကျင်သူများအကြားအခန်းကဏ္ switch ပြောင်းလဲခြင်းကို Daffy သည် Bugs Bunny ကဲ့သို့လိမ္မာပါးနပ်သူအဖြစ်သရုပ်ဖော်ခဲ့သည်။ သို့တိုင် Daffy သည်သစ္စာရှိမှုနောက်ကိုလိုက်ပြီးသူ၏ကိုယ်ပိုင်ပြသမှုတွင်ထင်ရှားခဲ့ပြီးအခြား Looney Tunes ဇာတ်ကောင်တစ် ဦး အား sidekick အဖြစ်ပေးလေ့ရှိသည်။ သူပင်လျှင် - ဤအရာသည်မတည်မငြိမ်ဖြစ်သောကြောင့်သင်၌၎င်းကိုသင်အမှန်တကယ်မကြားသောကြောင့် - chart'P' ဟုခေါ်သောအိမ် / ကခုန်မှတ်တမ်းနှင့်အတူယူကေတွင် edarty ဇုန် '(မင်းကိုယ့်ကိုကိုယ်ကြည့်ရှုရန်နှိပ်လိုက်သလား?).
Daffy's Lego minifigure သည်သူ၏ထူးခြားသောကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကိုသူ၏ထင်ရှားသော lisp 'desth-picable' တွင်သင်ကြားနိုင်လောက်သောနည်းဖြင့်စုံလင်စွာဖော်ပြသည် - ၎င်းသည်ဘဲ၏ရိုးရိုးရှင်းရှင်းဖြစ်သော်လည်းအသေးစိတ်ဖော်ပြချက်သည်သူသည် 'Rabbit Season' နိမိတ်လက္ခဏာနှင့်ပေါင်းစပ်ထားသည်။ ကိုင်ထားသည်။ ၎င်းသည်ကျော်ကြားသည့် 'hunting trilogy' ဘောင်းဘီတိုနှင့် ပတ်သက်၍ သူက Elmer Fudd ကိုအခြားပစ်မှတ်ထားရန်လှည့်စားရန် Bugs နှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သည့်ထင်ရှားသောရည်ညွှန်းချက်ဖြစ်သည်။
့အဖြစ် Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား Looney Tunes ဇာတ်ကောင်များ၏စီးရီးများသည် Bugs Bunny လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည် Daffy Duck လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်စိတ်ပျက်စရာမရှိပါ၊ ပထမဆုံးအတွက်မှန်ကန်သောအသုံးအနှုန်းကိုဖမ်းယူထားသည်။ Lego minifigure ဗားရှင်း။ ကျနော်တို့ပထမ ဦး ဆုံးပြော, surelyကန်အမှန်ဒုတိယစီးရီး (ဖြစ်သင့်သည် Lego Group မှဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်ဆုံးဖြတ်သည်။ ဒေါသထွက်နေသော Daffy Duck ပါဝင်သင့်သလား။
သူသည်ယနေ့တွင်အဓိကလူသားဖြစ်ချင်မှဖြစ်လိမ့်မည်။ သို့သော် Porky Pig သည်မူလ Looney Tunes ကြယ်ပွင့်ဖြစ်ပြီးအရှည်ဆုံးလှုပ်ရှားတက်ကြွသောဇာတ်ကောင်အဖြစ်သာမကအသိအမှတ်ပြုခံရသူလည်းဖြစ်သည်။artoon ဂိမ်းက၎င်း၏အစောပိုင်းနှစ်များတွင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ပို၍ ထင်ရှားသောဇာတ်ကောင်များ ၀ င်လာသည်နှင့်အမျှဝက်သည်အထောက်အကူပြုသရုပ်ဆောင်ခြင်းအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲခံရသော်လည်းဆယ်စုနှစ်များစွာမှယနေ့တိုင်အောင်လူကြိုက်များခဲ့သည်။
Porky ၏အကျော်ကြားဆုံးသောလက္ခဏာမှာသူ၏ထိတ်လန့်မှုကို Mel Blanc မှမခေါ်ယူမီကသူ့ကိုပထမဆုံးအသံထွက်ခဲ့သည် (Joe Dougherty) မင်းသားနှင့်မျှဝေသည်။ (ဥပမာ - အခြားဇာတ်ကောင်များမစွမ်းနိုင်သည့်စကားလုံးများကိုအသံထွက်နိုင်ခြင်း) ။ သူ့ Lego minifigure သည်ရိုးရှင်းသော်လည်းချိုသည်။ သူ၏သဘာဝကိုအလွန်ထိရောက်စွာပြသထားသည်။ 'ဒါကလူတိုင်းပဲ။ ' Looney Tunes ဘောင်းဘီတိုများနှင့်နီးကပ်စွာတည်ရှိပြီးသူနှင့်ပါ ၀ င်သည့်သင်္ကေတမှာပုံနှိပ်သောခွာများဖြင့်သေးငယ်သည့်ခြေထောက်တိုတိုသည် Nougat ရောင်စုံအသေးအဖွဲအ ၀ တ်အထည်၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုရှောင်ရှားသည်။ ) ။
ပါဝင်သည်အက္ခရာ ၁၂ လုံးထဲမှအထင်ရှားဆုံးဖြစ်သည် 71030 Looney တီးလုံး စုဆောင်းထားသောအသေးစား သူမ၏သမိုင်းသည် ၁၉၃၇ ခုနှစ်မှပြန်သွားခဲ့သော်လည်း Petunia Pig ဖြစ်သည်။ ထိုပွဲ ဦး ထွက်သည် Porky Pig ကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာအနေနှင့်ဖြစ်သည်၊ Mickey Mouse c ၏သရုပ်ဆောင်အဖြစ်ကစားခဲ့သည်။artသူ Minnie Mouse ကိုလက်ထပ်ဘယ်မှာ oon ။ Petunia ၏ချစ်ခင်မြတ်နိုးမှုကိုရရှိရန် Porky ၏ကြိုးပမ်းမှုများသည်အလွယ်တကူမအောင်မြင်နိုင်ပါ။ သူ၏အဆုံးသတ်ဖြစ်ရပ်ကြောင့်သူကရယ်စရာဖြစ်လာသည်။
Porky ၏ထောက်ခံမှုအခန်းကဏ္ times အဖြစ်အကြိမ်အနည်းငယ်သာအသုံးပြုခဲ့ပြီးသူ၏လူကြိုက်များမှုကျဆင်းသွားသည်နှင့် Petunia သည်ပိုမိုဆိုးရွားသည့်အခြေအနေသို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီးရှည်လျားသောလမ်းများအတွက်ပုံမှန်ပုံမှန်အသုံးပြုခြင်းကိုရပ်ဆိုင်းခဲ့သည်။ Looney Tunes နှင့်သက်ဆိုင်သည့်ပြပွဲများနှင့်အင်္ဂါရပ်များ၌သူမကုန်သွယ်ရေးတွင်ဆက်လက်ပါ ၀ င်နေပြီးအထောက်အပံ့နေရာတွင်ယူထားသည်။ Lego တန်းစီပါ။ သူမ၏အသေးစားရုပ်ပုံသည်သူမနှင့်အလွန်ဆင်တူသည်။ (သူမ Porky နှင့်ဆင်တူသည် - ၎င်းကိုသိပ်မစဉ်းစားပါနှင့်) teapot နှင့် teacup နှင့်ပြည့်စုံသည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာကိုကိုးကားလို့မရဘူး။
အဘယ်သူမျှမ Lego Looney Tunes Minifigures စုဆောင်းမှုသည် Wile E. Coyote မပါ ၀ င်ဘဲ ACME ပေတံဖြင့်အလေးချိန်ကျသင့်သည်။ ကံမကောင်းတာကဒါဆိုငါတို့စုဆောင်းမှုဟာ Wile E. Coyote မပါပဲလာတယ်။ ထုတ်လုပ်မှုအမှားတစ်ခုကြောင့် ၃၆- မျက်စိကန်းသောအိတ်သေတ္တာတွင် Wile E. ဝံပုလှေအသေးစားပါဝင်ခြင်းမရှိ Lego အဖွဲ့သို့ပို့ခဲ့သည် Brick Fanatics ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်အဘို့။
Coyote သည် Mark Twain ၏သတ္တ ၀ ါနှင့်ပတ်သက်သောသူ၏ Roughing It စာအုပ်တွင်ဖော်ပြထားသော“ ရှည်လျား။ ပါးလွှာသော၊ ဖျားနာ။ ဝမ်းနည်းနေသောအရိုးစု” အဖြစ်ရေးသားခြင်းမှလှုံ့ဆော်ပေးသောဇာတ်ကောင်ဖြစ်သည်။ သူက အမြဲ ငတ်မွတ်တယ် ' Looney Tunes မှာ Wile E. Coyote ရဲ့ဆာလောင်မွတ်သိပ်မှုဟာ Road Runner ကိုအဓိကထားပြီးလျင်မြန်စွာပြေးနေတဲ့ငှက်ကိုဖမ်းဖို့ကြိုးစားတဲ့အသေးစိတ်အစီအစဉ်တွေကိုသူရေးဆွဲမှာပါ။
Wile E. ၏ဂျပိန်သောဘောင်သည် ap ကိုကိုယ်စားပြုသည်artအဆိုပါများအတွက် icular အာရုံစိုက်ခြင်းနှင့်စိန်ခေါ်မှု Lego မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့၏ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သော minifigure ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်တွင်ပုံဖော်ဖို့ဒီဇိုင်နာများ။ တရား ၀ င်ပုံရိပ်များ (ကျွန်ုပ်တို့လက်၌မိတ္တူကူးသည်အထိ) သည်သူ၏ကိုယ်ထည်ပိုမိုကျဉ်းမြောင်းသည့်ကိုယ်ထည်အားကိုယ်ထည်ကြီး၏ပုံသဏ္headာန်နှင့်ပုံသဏ္headာန်မတူသောကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်၏ပုံသဏ္headာန်ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်အကျိုးသက်ရောက်သည်။ သူ၏ ဦး ခေါင်းသည်သူ၏အစာရှောင်ခြင်းညစာစားပွဲကိုလိုက်စားခြင်းဖြင့်အကောင်းဆုံးဖြစ်သောစိတ်ဓာတ်ပြတ်သားစွာဖော်ပြသည့်ဖော်ပြချက်ကိုပေးထားသည်။ ပေတစ်ခုပါ ၀ င်သည် (ပုံနှိပ်ထားခြင်းမရှိသော်လည်းဆိုသော်ငြား) သူ၏အမျိုးမျိုးသောကြံစည်မှုများ (အမြဲတမ်းမှားယွင်းနေတတ်သည်) အတွက်ကောင်းမွန်သောခေါင်းတလားဖြစ်သည်။
UPDATE - အ Lego ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းကိုထပ်မံထည့်သွင်းရန် Wile E. Coyote minifigure ကို Group မှပေးပို့လိုက်သည်။ တရားဝင်ပုံရိပ်ကတိပေးသကဲ့သို့၊ ၎င်းသည်စိတ်ကူးယဉ်။ ချစ်ဖွယ်ကောင်းသောဖန်တီးထားသောဒီဇိုင်းဖြစ်သည်၊ အဓိကအားဖြင့်သူ၏ပုံသဏ္hisာန်သည်သူ၏ဖော်ပြချက်ကိုဖမ်းမိသောကြောင့်ဖြစ်သည် , ဒါပေမယ့်လည်းသူ၏နှာခေါင်း၏သက်သက်အရှည်။
ဒီစီးရီးထဲမှာ minifigure နှစ်လုံးရှိတယ်ဆိုပါစို့ Lego တည်ဆောက်သူက Wile E. Coyote နှင့် Road Runner တို့၏တည်ဆောက်မှုဖြစ်သည်။ Road Runner မပါဘဲ Coyote မရှိပါ။
Road Runner ကိုဖမ်းရန် Coyote ၏အစီအစဉ်များသည်ပိုမိုရှုပ်ထွေးလာသည်နှင့်အမျှလျင်မြန်စွာလမ်းလျှောက်နေသော Runner ၏ဖမ်းဆီးခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ (သို့) မသိသောလွယ်ကူခြင်းသည်တသမတ်တည်းရှိနေဆဲဖြစ်ပြီးရုပ်ပြအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။ ၎င်းသည်သဲကန္တာရ၏နောက်ခံတွင်ရှိနေပြီး၎င်းသည်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သောလှုပ်ရှားမှုတွင်ဇာတ်ကောင်နှစ် ဦး ကဲ့သို့ဇာတ်ကောင်သဖွယ်ဖြစ်လာသည်။ ကြိုတင်ခန့်မှန်းရခက်သည့်ရူပဗေဒ၊ နံရံပေါ်ရှိပန်းချီကားများနှင့်နံရံပေါ်ရှိပန်းချီကားများကိုဖြတ်သန်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောခေါင်းလျှော်ရည်သည်ဤကြောင်နှင့်ကြွက်နှစ်ကောင်ကိုဖြတ်သန်းသွားသောစိတ်ကူးယဉ်။ ရောင်စုံရှုခင်း၏အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်လာသည်။ Lego မော်ဒယ်များ။
နောက်ဆုံးတွင်၎င်းသည်ရိုးရှင်းပါသည်city Wile E. ၏အစဉ်အဆက် - ပိုမိုရှုပ်ထွေးသောလုပ်ရပ်များနှင့်တောက်ပစွာဟန်ချက်ညီစေသော Road Runner ၏ဇာတ်ကောင်နှင့်ပုံပန်းသဏ္ာန်။ partအမှားအယွင်းကင်းသော Road Runner ၏ဖော်ပြချက်သည်သူမည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းနှင့်အမြဲတမ်းအချိန်ကိုက်ဖြစ်သည့် beep-beep ပေးပို့မှုအတွက်ပင်ရင်းဖြစ်သည်။ Lego ဒီမှာအသေးစားပုံစံ။ အကယ်၍ ဤစီးရီးတွင်ဖော်ပြထားသောဇာတ်ကောင် ၁၂ လုံးအနက်မည်သူမဆိုအုတ်ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသောအရာကဲ့သို့အဆင်ပြေမည်ဆိုပါက Road Runner ဖြစ်လိမ့်မည်ဆိုပါကဒီဇိုင်းအဖွဲ့သည်art သော့ချက်အသေးစိတ်အချက်အလက်များအားလုံးကိုအသေးစားပုံစံသို့ပြန်ဆိုရာတွင်၊ partအကြီးစားအမြီးနှင့်သူ၏ခေါင်းပေါ်မှာအမွေးအတောင်နှင့်ပတ်သက်။ icularly ။
ဒါဟာဒါဇင်ဒါဇင်လောက်အနည်းဆုံးတိတိကျကျခံစားမိနိုင်တယ် Lego Looney Tunes, ဒါပေမယ့်အသေးစားပုံများထက်အခြားသူများကိန်းဂဏန်းများနှင့်ပိုမိုနီးကပ်စွာမည်မျှရှိနေသည်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းအားဖြင့်၎င်းသည်နှစ် ဦး စလုံး၏ဆွဲဆောင်မှုနှင့်ဆွဲဆောင်မှုကိုဟန်ချက်ညီစေရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။artoon သည်အခြေခံသည် Lego ပုံစံကလျှောက်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Sylvester James Pussycat, Sr သည်အခြား Looney Tunes ၏အရှည်ဆုံးသရုပ်ဆောင်ဇာတ်ကောင်တစ် ဦး ဖြစ်ပြီး ၁၉၃၉ ခုနှစ်တွင်ပွဲ ဦး ထွက်နှင့် c ၁၀၀ ကျော်တွင်ပြသခဲ့သည်။artBons Bunny၊ Porky Pig နှင့် Daffy Duck နောက်ကွယ်ရှိသူများသာဖြစ်သည်။ သူသည် Looney Tunes ကြယ်ပွင့်များအနက်အလှဆုံးဖြစ်ပြီးသူ၏သုံးလုံးကဲ့သို့ဖြစ်သည်artoons သည် Academy Awards ကိုအခြား Looney Tunes ဇာတ်ကောင်များထက် ပို၍ ရရှိခဲ့သည်။ Lisp နှင့်စကားပြောရန်နောက်ထပ်တစ်ခု - စကားပြောသောအခါသူ၏လျှာကိုတမင်တကာဆွဲထုတ်ခြင်းအားဖြင့် - Sylvester ကို Tweety, Speedy Gonzales နှင့်အနည်းငယ် ပို၍ ထင်ရှားသော Hippety Hopper တို့နှင့်ကွဲလွဲနေသည်။
သူ၏ရည်မှန်းချက်ဖြစ်သောအရသာရှိသောအစာ၊ များသောအားဖြင့် Tweety ပုံစံဖြင့် - မည်သည့်အစီအစဉ်နှင့်ကြံစည်မှုများ၏နောက်ကွယ်တွင်မဆိုလှုံ့ဆော်မှုဖြစ်သည်။ သို့သော်ဤများသောအားဖြင့်အချို့မှတစ်ဆင့်ဖျက်သိမ်းသို့ရောက်ကြ၏ တော်တော်ဆိုးတယ်ထိုစဉ်က Tweety ၏လုပ်ရပ်နှင့်မှတ်ချက်များကအမြဲတမ်းပိုဆိုးလာသည်။ သူရဲကောင်းကိုစားဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ရန်သူအတွက်တော့သူအပြစ်ပေးပြီးတဲ့နောက်အပြစ်ပေးခံရတဲ့အတွက်ကြောင်ကိုသနားစရာတွေအများကြီးရှိတယ်။ သည်းခံခြင်းဆိုတာအမှန်ပဲ။
Sylvester အဆိုပါ Lego minifigure သည်အနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်ကြောင်၏ပုံသဏ္ဌာန်ရှိသောခေါင်းနှင့်မျက်နှာသွင်ပြင်မှအနီရောင်နှာခေါင်းနှင့်ဂရုတစိုက်ပုံနှိပ်ထားသောကိုယ်ထည်နှင့်ခြေထောက်များနှင့်ဘေ့စ်ဘောလင်းနို့တို့ကိုပင်စုံလင်သောကိုယ်စားပြုမှုဖြစ်သည်။ စိတ်ပျက်ရသည့်တစ်ခုတည်းသောခံစားချက်မှာစီးရီးတွင်ထည့်သွင်းထားသော Tweety နှင့် Speedy Gonzales အသေးစားရုပ်ပုံများဖြစ်သည်၊ Sylvester နှင့်အတူလက်ကိုင် nanofigure တစ်ခုအပါအ ၀ င်လည်းပြီးပြည့်စုံလိမ့်မည်။
Wile E. Coyote နှင့် Road Runner တို့၏တွဲဖက်မှုနှင့်အတူထပ်တူရဝုဏ်နှင့်အတူ Tweety ၏အထင်ကရပွဲများသည် p ၌ရှိသည်။artSylvester the Cat နှင့်မိတ်ဖက် (နှင့်ပconflictိပက္ခဖြစ်) သည်အမဲရောင်နှင့်အဖြူရောင်ကြောင်လေးများသည်ချိုသောအစာအဖြစ်စားသုံးရန်ကြိုးပမ်းသော်လည်း၊ အတားအဆီးတစ်ခု (နှစ်ခု) (Granny, Hector the Bulldog, ခွေးများစွာသို့မဟုတ်အခြားကြောင်တစ်ကောင်) အတွက်ဖြစ်သည်။ Sylvester သည်ငှက်ကိုစားရန်စီမံသည့်အချိန်တိုတွင်ပင်သူသည် Granny အားဖြင့်သူ့ကိုတံတွေးထွေးရန်ပြုလုပ်ထားခြင်းကြောင့် Tweety သည်ထိပ်ဆုံးမှထွက်လာသည်။
ဒီစီးရီးထဲမှာပိုပြီးထင်ရှားတဲ့ minifigures နှင့်အများကြီးလိုအပ်သောအခြားဇာတ်ကောင်ဆက်ဆက်ရှိပါတယ် artရိုက်ထည့်ဖို့ Istic အနက် Lego ပုံစံရှိပေမယ့်တ ဦး တည်းရှိလျှင် Lego Looney Tune စုဆောင်းထားသောအသေးစား မလိုအပ်သော line-up သည် Tweety ဖြစ်သည်။
ဇာတ်ကောင်အနေဖြင့်သူသည်မှတ်မိလောက်အောင်အကောင်းဆုံးသူတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးသူ၏အသံသည် ('ငါ puddy ကြောင်ကို tawt I tawt') မှတ်မိရန်လွယ်ကူသည်၊ သို့သော်ကြီးမားသောညံ့ဖျင်းသော Sylvester အတွက်အလွန်သေးငယ်သောအဝါရောင်ငှက်၏ပြီးပြည့်စုံသောသတ္တုပါးသည် Cat, nanofigure-scale version တစ်ခုသည် cuter သည် ပို၍ သင့်လျော်ပြီးအလွန်များပြားလိမ့်မည်။ အသေးစားရုပ်ပုံတစ်ခုအနေဖြင့် Tweety သည် Sylvester နှင့်မလုံလောက်ပါ။ ဒါ့အပြင်သူရဲ့ဒီဇိုင်းဟာကြီးမားတဲ့ပုံသွင်းထားသည့် ဦး ခေါင်းကိုအဓိကထားပြီးငှက်ရဲ့အပြစ်ကင်းစင်ပြီးမေ့မေ့ပျောက်ပျောက်ဖော်ပြချက်ကို (မျက်နှာပြင်အောက်မှာအောက်လျှောစီးစွာစီးဆင်းနေခြင်း) ကိုအပြည့်အဝဖမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်။ သေးငယ်တဲ့ပုံစံဟာနောက်ကွယ်ကပုံနှိပ်ထားတဲ့အမြီးကိုကျော်လွန်ပြီးရှေ့ကိုလိုင်းသုံးခုနဲ့အလှဆင်ထားတယ်။ သို့တိုင်၎င်းသည်လိုအပ်သည့်အရာအားလုံးဖြစ်သည်။
မက္ကဆီကိုတစ်နိုင်ငံလုံးရှိအလျင်မြန်ဆုံးကြွက်ဖြစ်သည့် Speedy Gonzales အတွက်လည်းအလားတူခံစားချက်ဖြစ်သည်။ Tweety ကဲ့သို့ပင်ဒိန်ခဲကိုလိုက်ဖမ်းလိုက်သော Speedy ကို Sylvester the Cat (El Gringo Pussygato) နှင့်ဆန့်ကျင်သော Looney Tunes ဘောင်းဘီတိုများတွင်မကြာခဏဆောက်လေ့ရှိသည်။ ၎င်းသည်ကြွက်တစ်ကောင်အနေနှင့်သူနှင့်ကြောင်၏အရွယ်အစားကွာခြားချက်သည်art ဟာသထဲမှာ။ Daffy Duck (Loco ဘဲ) နှင့်သူ၏တိုက်ပွဲများအတွက်လည်းအလားတူပင်ဖြစ်သည်။
နောက်တဖန်အဖြစ် - ဇာတ်ကောင်တစ် nanofigure ဗားရှင်း p ကဲ့သို့အားလုံးပိုကောင်းအလုပ်လုပ်ခဲ့ကြလိမ့်မယ်art ၏ဤပထမ ဦး ဆုံးလှိုင်း၏ Lego Looney Tunes, Speedy သည်အသေးစားပုံစံအရွယ်အစားရှိသည်။ နှိုင်းယှဉ်မှုအတိုင်းအတာကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမပြုသော်လည်း၎င်းသည်အလွန်ချစ်မြတ်နိုးရသောဇာတ်ကောင်တစ်မျိုး၏သစ္စာရှိလိုက်လျောညီထွေဖြစ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည် Lego မက္ကဆီကန်မောက်စ်၏အဝါရောင် sombrero၊ အဖြူရောင်ရှပ်အင်္ကျီနှင့်ဘောင်းဘီတိုများနှင့်အနီရောင်လည်ဆွဲရှည်တို့ကိုဖမ်းယူနိုင်သည့်အရိုးရှင်းဆုံးအသေးစိတ်အချက်အလက်များဖြင့်ပုံစံ။ သူ၏ပုံသဏ္headာန်ခေါင်းတွင်ရှိသောစကားရပ်သည် (sombrero တစ်လုံးတည်းကိုဖြစ်စေသည်) ဇာတ်ကောင်၏စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောအပြုအမူကိုဖမ်းစားနေစဉ် Lego ဒိန်ခဲနှင့်တူအောင်ပုံနှိပ်ထားသော 'ဒိန်ခဲဆင်ခြေလျှော' အပိုင်းအစများအုပ်စုတွင်ပါ ၀ င်မှုသည်ဤစီးရီးတစ်ခုလုံး၏အပြည့်စုံဆုံးအသေးစိတ်ဖြစ်သည်။
ဒီစီးရီးတွင် Speedy Gonzales ၏ပါဝင်မှုသည်သူ၏ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောလူကြိုက်များမှုကိုရောင်ပြန်ဟပ်သည်။ သူသတိထားသင့်သည်မှာသူသည်သူနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်အောင်မြင်တွေ့ရသောပုံစံများနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးမှုများသည်နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသည်။ ဘယ်အချိန်မှာကို Cartoon ကွန်ယက်သည် ၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင် Speedy's c ကိုဖယ်ရှားခဲ့သည်artoons, ဇာတ်ကောင်တစ် ဦး ထိုးစစ်မက္ကဆီကန်ကျပုံစံတင်ပြခဲ့ခံစားရတယ်။ သို့သော် Speedy သည်လက်တင်အမေရိကနှင့်ဟစ်စပန်းနစ်များတွင်လူကြိုက်များသောဇာတ်ကောင်တစ် ဦး အဖြစ်ဆက်လက်တည်ရှိပြီးရန်လိုသောအမြဲတမ်းသူရဲကောင်းမက္ကဆီကန်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်နာမည်ကြီးသည်။ ၎င်းသည် ၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင် Speedy ကိုယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအမှတ်အသားအဖြစ်ထည့်သွင်းခြင်းပါဝင်သောပရိသတ်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးကိုလှုံ့ဆော်ပေးခဲ့သည်။
အဆိုပါ Tasmanian မာရျနတျ ap ခဲ့ပေမယ့်art Looney Tunes ၏ ၁၉၅၀ ပြည့်လွန်နှစ်များ မှစ၍ သူသည်ပြသခြင်း၏အခြားရွေးချယ်စရာဇာတ်ကောင်များထဲမှလူကြိုက်များခဲ့ပြီး ၁၉၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်များအတွင်းထင်ပေါ်ကျော်ကြားခဲ့သည်။ Taz သည်ဘဝနှင့် ပတ်သက်၍ ပို၍ တိရိစ္ဆာန်ဆန်ဆန်ချဉ်းကပ်မှုကိုခံယူကာတိုတောင်းသောကာမဂုဏ်ခံစားခြင်း၊ Tasmanian Devil သည်အနှေးနှင့်အမြန်လှည့်ပတ်ရန်အလွန်မြန်ပြီး Tasmanian Devil ယေဘုယျအားဖြင့်အော်မြည်သံများနှင့်မြည်သံများ၌သာဆက်သွယ်သော်လည်းမည်သည့်အရာကိုမဆိုကိုက်ဖြတ်နိုင်သည်။ Taz ကိုအေးဆေးတည်ငြိမ်အောင်လူသိများသောအရာတစ်ခုရှိသည်။
Taz သာဘောင်းဘီတို (စ။ ) ၏လက်တဆုပ်စာ၌ထင်ရှားartအလွန်အမင်းအကြမ်းမဖက်ဖြစ်မည်ကိုစိုးရိမ်သောကြောင့်အစပိုင်းတွင်အကာအကွယ် ပေး၍၊ သူပြန်လာရန်တောင်းခံလာသည့် 'စာလုံးသေတ္တာများ') ကို Warner Bros.artoons များသည် ၁၉၆၄ ခုနှစ်တွင်ပိတ်ခဲ့သော်လည်း Bugs Bunny နှင့် Daffy Duck တို့နှင့်အတူတကွလုပ်ကိုင်ရန်အချိန်ရခဲ့သည်။ သူကယုန်ကိုစားသည်ဖြစ်စေမစားသည်ဖြစ်စေသူနှင့်လည်ပင်းညှစ်နေခြင်းကိုသတ်မှတ်ခြင်းပါ ၀ င်သည်။ သူသည် ၁၉၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်များက Looney Tunes ပြန်လည်စတင်စဉ်အတွင်းလူကြိုက်များမှုအသစ်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီး Bugs ၏နောက်ကွယ်တွင်တရား ၀ င်မဟုတ်သောကုန်ကြမ်းပစ္စည်းတခုခုပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။
မိမိအသေးငယ်တဲ့ရုပ်ပုံလွှာဟာအကောင်းဆုံးထဲကတစ်ခုဖြစ်သည် Lego Looney Tunes စီးရီးသည်ထူးခြားသော၊ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်ပြီးပျော်စရာပင်ကိုစရိုက်များကိုမယုံနိုင်လောက်အောင်ကောင်းမွန်စွာဖုံးအုပ်ထားပြီးသူ၏လေပြေစွမ်းရည်ကိုကိုယ်စားပြုရန်လှည့်ဖျားအခြေစိုက်စခန်းအဖြစ်လည်းကောင်း၊ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုမှု၊ အမြီးနှင့်အမြန်တိုတိုနှင့်သင်မျှော်လင့်နိုင်သမျှ Lego Tasmanian Devil ကြည့်လို့ရနိုင်သည်။
ရောမနတ်ဘုရားအင်္ဂါအင်္ကျီဖြင့် ၀ တ်ဆင်ထားသောသံချပ်ကာအင်္ကျီကို ၀ တ်စုံဖိနပ်တစ်ရံဖြင့်တပ်ဆင်ထားပြီး Marvin the M နှင့်တူသောသူမရှိ။art၎င်းသည် Looney Tunes ငါးခုတွင်အစပိုင်းတွင်သာပါဝင်ခဲ့သော်လည်းသူ၏ဆက်လက်ရေပန်းစားမှုတွင်ထင်ဟပ်နေသည်art1963 အထိ oons ။
Marvin ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာအီးကိုဖျက်ဆီးရန်ဖြစ်သည်artသူသည် Venus နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်၏အမြင်ကိုမှေးမှိန်စေသောကြောင့်သူသည်လွန်ခဲ့သောအနှစ်နှစ်ထောင်ကျော်မှအကြိမ်ပေါင်းများစွာကြိုးပမ်းခဲ့ပြီးအထူးသဖြင့်သူ၏ Illudium Q-36 Explosive Space Modulator ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ကြီးမားသောဒိုင်းနမိုက်၏ကြီးမားသောချောင်းကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
သူ၏ရည်မှန်းချက်၏ရန်လိုခြင်းနှင့်အဖျက်သဘောသဘာဝသည်သူ၏တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုကိုနူးညံ့သိမ်မွေ့။ လက်တွေ့ကျကျဖြည့်ဆည်းခြင်းကိုဆန့်ကျင်သောကြောင့် Marvin နှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည်။ ဒီဇာတ်ကောင်ကဇာတ်ကောင်ကိုအမှားကင်းတဲ့အပြစ်ကင်းစင်စေပြီး `ဒီချစ်စရာမကောင်းဘူးလား '၊ ' ဒါကငါ့ကိုအရမ်းဒေါသထွက်စေတယ်၊ ​​တကယ်ဒေါသထွက်တယ်၊ E ဖြစ်ဖို့ထင်ခဲ့သည်arth-shattering kaboom! '
Marvin သည် c ကိုကျော်ဖြတ်နိုင်သည့် Looney Tunes ကြယ်ပွင့်တစ် ဦး ဖြစ်သည်artoon အလတ်စား ထင်ရှားတဲ့ဥပမာမဆိုအရေအတွက် လူကြိုက်များယဉ်ကျေးမှုအပေါ်သူ၏ပိုမိုကျယ်ပြန်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရန်။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်, မိမိအဘို့အရေးကြီးသောအသေးစားဖြစ်ပါတယ် Lego Looney Tunes Minifigures စီးရီးတွင်ပါ ၀ င်ရန်အုပ်စုဖွဲ့ပါ။ ထုတ်လုပ်မှုတွင်အမှားရှာရန်အနည်းငယ်သာရှိပါသည်။ အတော်လေးရိုးရှင်းသောဒီဇိုင်းဖြစ်သော်လည်း Marvin ၏အသွင်အပြင်နှင့်အသွင်အပြင်အတွက်အရေးကြီးသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များအားလုံးသည်သူ၏သေးငယ်သောပုံသဏ္inာန်၌ဂရုတစိုက်ဖမ်းယူထားသည်artသူ၏မျက်စိအတွက်ရွေးချယ်ထားသောအသုံးအနှုန်းနှင့်သူ၏ဖိနပ်အတွက်ပုံနှိပ်ခြင်းအတွက်ဖြစ်သည်။
သူ၏အမြင့်ဆုံးသံခမောက်လုံးကို (Centurion ၏သံခမောက်နှင့်ဆင်တူသည့်) push-တံမြက်စည်းဒီဇိုင်းပင်အနီးကပ် - ကွဲပြားခြားနားသောအဝါရောင်နှစ်ခုဖြင့်ပုံသွင်းထားသည်။ တိုးတက်မှုအတွက်နယ်ပယ်တစ်ခုရှိခဲ့လျှင် (ကျွန်ုပ်တို့အတော်ကြိုးစားနေသည်) ၎င်းသည်သူ၏ခေါင်းတစ်ဖက်တစ်ချက်၌ဒုတိယမျက်လုံးဖော်ပြခြင်းအတွက်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရန်အခွင့်အလမ်းသာဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်သူ့ရဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့ Legion တွေအတွက်၊ Lego အမ်ဗင်artian အစက်အပြောက် -on ကိုဖြစ်ပါတယ်။
ယခုဤခက်ခဲတဲ့ bit ဖြစ်ပါတယ်။ ကနေအနည်းငယ်သာရှိပါတယ် Lego အုပ်စု၏ရှည်လျားသောသမိုင်း - သို့မဟုတ်နောက်မှဖြစ်ပျက်နိုင်သည့်အရာ၊ ဒုတိယစီးရီး မှလွဲ၍ - နှိုင်းယှဉ်ရန် 71030 Looney တီးလုံး စုဆောင်းထားသောအသေးစား နှင့်အတူ, ဒါကအပြုသဘောနှင့်အနှုတ်နှစ် ဦး စလုံး။
အသေးစိတ်အာရုံစိုက်ရန်နှင့်သီးသန့်ပုံသွင်းထားသောခေါင်းတစ်လုံးစီပါ ၀ င်သော bespoke-ဒီဇိုင်းအသေးစားဓာတ်ပုံ ၁၂ ခုထုတ်လုပ်ရန်ပေးသောဘတ်ဂျက်အတွက်၎င်းသည်စုဆောင်းထားသည့်ပစ္စည်းများဖြစ်သည်။artအဘယ်သူ၏တိကျမှန်ကန်မှုကို၎င်း၏အရင်းအမြစ်ပစ္စည်းမှပြိုင်ဘက်နီးပါးရပ်နေသော oon ဇာတ်ကောင်။ ဤအရာများသည်စုဆောင်းရလွယ်ကူသော၊ အလွန်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသောနှင့်သစ္စာရှိသောဖန်တီးမှုများဖြစ်သည် Lego- သဟဇာတ။ သူတို့ဟာကောင်းမွန်စွာထုတ်လုပ်ထားတဲ့ဇာတ်ကောင်တွေဖြစ်ပြီးစျေးနှုန်းအနည်းငယ်သာပြောနိုင်ပါတယ်။ တစ်ချိန်ကတစ်လပေါင် ၅ ပေါင်လောက်တောင်မမှားပါဘူး၊ partLooney Tunes ပရိတ်သတ်များအတွက် icularly ။
သင်တစ် ဦး အကျိုးစီးပွားနှင့်အတူ ဦး ဆောင်နေတယ်ဆိုရင် Legoသို့သော်နောက်ဆုံးပေါ်အသေးစားဓာတ်ပုံများသည်ပေါင် ၃.၄၉ ဈေးနှုန်းဖြင့်ပင်စျေးကြီးမည်ဟုခံစားရလိမ့်မည်။ ထိုတစ်ချက်တည်းအသေးစားခေါင်းများသည်ဤဆိုင်များကိုစျေးဆိုင်များတွင်အလွယ်ကူဆုံးတွေ့မြင်နိုင်သည်။ သို့သော်ထိုခေါင်းများကအသေးအမွှားများ၏နောက်ဆုံးတည်ဆောက်ပုံကိုအထောက်အကူပြုဖွယ်ရှိသည်။art အရာအားလုံးထံမှ (Fabuland ထံမှဘာမှမှလွဲ။ ) ။ ဒီအသေးငယ်တဲ့ပုံတွေကမင်းရဲ့အခန်းကဏ္playမှာဘယ်လိုပါဝင်နိုင်သလဲ Lego စုစုပေါင်းစုဆောင်းမှုသည်သင်အနည်းဆုံးပေါင် ၄၂ ပေါင်ကျသင့်သည်ကိုအပြည့်အ ၀ တန်းစီ။ ရွေးရန်ဆုံးဖြတ်သည်။ တစ်ခုခုကိုလမ်း, သူတို့နေဆဲထက်အများကြီးပိုကောင်းတန်ဖိုးကိုတင်ပြ VIDIYO ရဲ့ Bandmates.
A Lego Looney Tunes minifigure သည်မမြင်နိုင်သောမြင်ကွင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်သင်မြင်သောအခါ cartoon ဇာတ်ကောင်နှင့် minifigure ပုံစံပေါင်းစည်းစုစုပေါင်းသဘာဝကျပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောအတွက်အလုံးစုံဒီဇိုင်း၏တိကျမှန်ကန်မှုသည် 71030 Looney တီးလုံး, ခေါင်းကိုမှို, စကားရပ်နှင့်အရောင်မှတဆင့်သော Lego နာမည်ကျော်ဇာတ်ကောင်တစ်ဒါဇင်၏ဆွဲဆောင်မှု၊ စွမ်းအင်နှင့်လူပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးကိုစုပေါင်းရန်နီးပါးperfectlyုံပြည့်စုံစွာစီမံနိုင်ခဲ့သည်။
သို့သော်ဤမျှလောက်များလွန်းသဖြင့်၎င်းသည်ကုန်ကျစရိတ်နီးပါးဖြစ်နိုင်သည် Lego အတွေ့အကြုံ။ ပို။ ဒါ စုဆောင်းထားသောအသေးစား အဆိုပါ Simpsons များအတွက်စီးရီးနှင့် Disney မကြာသေးမီနှစ်များကဇာတ်ကောင်များဖြစ်သော Looney Tunes စီးရီးများသည်အရင်းအမြစ်ပစ္စည်းအဖြစ်သို့ပြင်းထန်စွာမြှုပ်နှံခဲ့သည် Lego Looney Tunes ကြယ်ပွင့် ၁၂ ပွင့်အားအပန်းဖြေအနားယူရန်ဆွဲဆောင်ထားခြင်းကြောင့်ဇာတ်ကောင်တစ်ခုချင်းစီ၏ဗားရှင်းသည်အနည်းငယ်မျှပင်ပျောက်ဆုံးသွားသည်။
ဒါဟာအဖြစ်မှန်ဝေဖန်မှုတစ်ခုပါ Lego ချစ်စရာကောင်းတဲ့ Looney Tunes ၏ဗားရှင်းများသည် ap ကိုရွေးရန်အနည်းငယ်သာရှိသည်artနှင့်ပထမဆုံးကြားနာခြင်းတွင်မည်သူမဆိုအိပ်မက်မက်နိုင်သည့်အရာတစ်ခုအတွက် 'Lego'နှင့်' Looney Tunes '၊ 71030 Looney တီးလုံး စုဆောင်းထားသောအသေးစား စိတ်ဓာတ်မကျပါ၊ မှန်ကန်သော nods များ၊ အသုံးအနှုန်းများ၊ အရောင်များနှင့်ပျော်ရွှင်စရာများကိုဖြန့်ဝေပေးသည်။
အဆိုပါ Lego Minifigures အသင်းသည်ဤစုဆောင်းမှုထဲသို့ ၀ င်ရောက်လာသောအလုပ်နှင့်ကျွမ်းကျင်မှုများဖြင့်ဥယျာဉ်ထဲမှထွက်ခွာခဲ့သည်။artကမ္ဘာကြီးကို
ဒီစုဆောင်းမှုကိုပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည် Lego Group မှ။
LEGO 71030 Looney Tunes Collectible Minifigures တွင်ဇာတ်ကောင်မည်မျှရှိသနည်း။
12 တွင်ပါဝင်သော Looney Tunes အက္ခရာ ၁၂ လုံးရှိသည် စုဆောင်းထားသောအသေးစား စီးရီး, ဇာတ်ကောင်တစ် ဦး ချင်းစီ၏ခန့်မှန်းသုံးခု minifigures ၏တ ဦး တည်းပြီးပြည့်စုံ box ထဲမှာပါဝင်သည်။
LEGO 71030 Looney Tunes အသေးစားရုပ်ပုံသည်မည်မျှကုန်ကျမည်နည်း။
တစ်ခုချင်းစီကို 71030 Looney တီးလုံး minifigure သည်ပေါင် ၃.၄၉ / ၄.၉၉ / ယူရို ၃.၉၉ ကျသင့်ပြီးဆိုလိုတာကစုစုပေါင်း ၁၂ လုံးသည်အနည်းဆုံးပေါင် ၄၂ ကျသင့်သည်။ နှိုင်းယှဉ်ခြင်းအလိုငှါ, ၏ပထမ ဦး ဆုံးစီးရီး စုဆောင်းထားသောအသေးစား တစ်ခုလျှင်တစ်ခုလျှင်ပေါင် ၁.၉၉ ကျသင့်သည် စုဆောင်းထားသောအသေးစားထိုကဲ့သို့သောဒုတိယအဖြစ် ဟယ်ရီပေါ်တာ စီးရီး DC စူပါဟီးရိုးစီးရီးနှင့်စီးရီး ၂၁ တို့ကတစ်မိနစ်လျှင်တစ်ပုံလျှင်ပေါင် ၃.၄၉ ကျသင့်သည်။
LEGO 71030 Looney Tunes Collectible Minifigures စီးရီးထဲမှာဘယ်ဇာတ်ကောင်တွေပါလဲ။
စာလုံး ၁၂ လုံးပါ ၀ င်သည် Lego 71030 Looney တီးလုံး Minifigures စီးရီးမှာ Bugs Bunny၊ Lola Bunny၊ Daffy Duck, Porky Pig, Petunia Pig, Road Runner, Wile E. Coyote, Speedy Gonzales, Sylvester the Cat, Tweety, Marvin the M တို့ဖြစ်သည်။artian နှင့် The Tasmanian Devil ။
LEGO 71030 Looney Tunes Collectible Minifigures စီးရီးတွင် Elmer Fudd နှင့် Yosemite Sam သည်အဘယ်ကြောင့်မဟုတ်သနည်း
Elmer Fudd နှင့် Yosemite Sam တို့သည်အဓိကအားဖြင့်အဓိကဇာတ်ကောင်နှစ် ဦး ဖြစ်သည် Lego Looney Tunes Collectible Minifigure စီးရီး။ သို့သော်သူတို့နှစ် ဦး စလုံးစီးရီးထဲကနေပျက်ကွက်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, အများဆုံးဖွယ်ရှိနှင့်အတူထိပ်တိုက်တွေ့မှုကြောင့် Lego အမှတ်တံဆိပ်တန်ဖိုးများ ပconflictိပက္ခကစားန်းကျင်.
← ဒီ LEGO NINJAGO Seabound အစုံ၏ရက်စွဲလား။
LEGO 71030 Looney သည်စုဆောင်းနိုင်သောအသေးစားပုံသေတ္တာများဖြန့်ဝေသည် →